नीतिगत चेपुवामा जलविद्युत् उत्पादन र उपभाेग - UrjaKhabar नीतिगत चेपुवामा जलविद्युत् उत्पादन र उपभाेग - UrjaKhabar
काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशमा विद्युत उत्पादन ३ हजार मेगावाट पुर्‍याउने घाेषणा गरेकाे छ । विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै देशैभरि विद्युतीय सवारी प्रयोग विस्तार गर्ने याेजना छ । याेसँगे चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गर्ने नीति पनि घोषित छ । तर, नीति कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा विद्युतीय सवारीमा महसुल बढाइयो । हाल सामाजिक सञ्जालमा यसबारे विभिन्न विचारहरू व्यक्त भएका छन् । निजी जलविद्युत उत्पादकहरूको प्रतिक्रिया पूर्णतः नकारात्मक छ ।
कुनै समयमा देश कृषि प्रधान मुलुक भनिन्थ्यो, खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । त्यही अनुसारका नीति थिए तर अचेल विदेशबाट खाद्यन्न पैठारी वर्षेनी बढेका तथ्यांक छन् । हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा नै थियो । अहिले काठको विकल्पयुक्त सामान र फर्निचर विदेशबाट पैठारी भएका छन् । यस्ता नीति र तिनको कार्यान्वयको अन्तरका रमाइला उदाहरण अनेकौ छन् ।
नेपाल, विश्वमै जलस्रोतको धनी मुलुक भनेर चिनिन्छ । कूल ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भाव्यता अाैंल्याइएकाे छ । प्राविधक रूपले ४२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाउँछ । आर्थिक सर्भेक्षण २०७६/७७ अनुसार २०७६ फागुनसम्ममा निजी क्षेत्रको उत्पादन समेत गरी १,२३३ मेगावाट जलविद्युत उत्पादन भएको छ । यो केवल १.४९ प्रतिशत मात्र हो ।
जलविद्युत उत्पादनको यो परिमाणमा आइपुग्न करिब ११० वर्ष लाग्यो । वि.सं. १९६८ मा ५०० किलोवाटको चन्द्रज्योती जलविद्युत् आयोजना फर्पिङबाट देशमा विद्युत् उत्पादनको इतिहास सुरु भएको थियो । यो नेपालको पहिलो जलविद्युत योजना हो भने एसियाको दोस्रो ।
११० वर्षमा ८१ वर्षसम्म निजी क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनमा संलग्न थिएन । विद्युत् ऐन, २०४९ ले जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रलाइ प्रवेश गराएकाे हाे । निजी क्षेत्र संलग्न हुन थालेपछि जलिवद्युत् उत्पादन छिटो-छिटो बढेको छ । जलविद्युत र अन्य माध्यमहरु थर्मल, सौर्य र लघु तथा साना परियोजना समेतबाट जम्मा १,३५५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको देखिन्छ ।
एक वर्ष पहिलेको आर्थिक सर्भेक्षणमा विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट चालू आ.व. २०७६/७७ मा १,००७.८ मेगावाटका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने उल्लेख छ । चालू आव समाप्त हुन करिब डेढ महिना बाँकी छ र कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन बन्दाबन्दीको अवस्था रहेकोले सबै आयोजना समयमै पूरा नहुने सम्भावना छ ।
गत वर्ष फागुनसम्मकाे उत्पादन तथ्याङ्क र यस वर्षको सोही अवधिसम्मको तथ्याङ्कको अन्तरबाट हेर्दा अब यस वर्ष करिब ६५० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ । यो उत्पादन नै हाम्रो मागको लागि पर्याप्त हुने जस्तो प्राधिकरणको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
अब, विद्युतको माग र खपत हेरौ । प्राधिकरणको प्रक्षेपण, सन् २०२० मा करिब २ हजार मेगावाट विद्युत् खपतका लागि माग हुन्छ भन्ने थियो । तर, सो अनुपातमा माग बढेन । दीपावलीको समयमा सबैभन्दा धेरै विद्युत खपत हुँदा पनि करिब १२५० मेगावाट मात्र बिजुली माग भयो । अन्य समयमा यो माग घटेर करिब ९ सयदेिख देखि ११ सय मेगावाट हाराहारी रहने गर्छ ।
माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूले आगामी वर्ष सबै क्षेत्र र समयको माग पुरा गरेर नेपाल अब विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने हैसियतमा पुग्ने व्यहोरा आ.व. २०७७/७८ को बजेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । साथै, आउँदो वर्षमा थप १३ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गर्नु भएको छ । विद्युतको खपत गार्हस्थ, औद्योगिक, व्यापारीक र अन्य क्षेत्र पश्चात केही निर्यात हुने गरेको आर्थिक सर्भेक्षणले देखाएको पनि छ । हालसम्म उत्पादित विद्युत्ले माग धानेको छैन । त्यसैले उच्च मागको समयमा भारतबाट विद्युत आयात पनि भएको छ ।
अब मागभन्दा बढी उत्पादन गर्ने अवस्थामा छ । देशको क्षमता अनुसार मागभन्दा बढी विद्युतको उत्पादन होस् भन्ने नै हो । मागभन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन हुनु भनेको विकासमा अगाडि लम्किने उत्साह, ऊर्जा र उज्यालो प्राप्त गर्नु हो ।
बजेट वक्तव्य, आर्थिक सर्भेक्षण र प्राधिकरणको माथिका तथ्याङ्कले चालू आवको अन्त्यसम्मको स्वदेशी विद्युत उत्पादनले औसत माग धान्न सक्ने देखिन्छ । केही बढी हाेला । आगामी आ.ब. मा थप हुने उत्पादनको कारण नेपालले अब भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने छैन । बरु निर्यात गर्ने युगको सुरु हुन्छ । बजेट वक्तव्यले यही प्रमाणित गरेकै छ ।
जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र प्राधिकरणको व्यवस्थापन कुशलताको कारण विद्युतको लोडसेडिङ हटेको छ । अब मागभन्दा बढी उत्पादन गर्ने अवस्थामा छ । देशको क्षमता अनुसार मागभन्दा बढी विद्युतको उत्पादन होस् भन्ने नै हो । मागभन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन हुनु भनेको विकासमा अगाडि लम्किने उत्साह, ऊर्जा र उज्यालो प्राप्त गर्नु हो ।
अब, सरकार र प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउने योजना बनाउनुपर्‍यो अथवा विद्युत् निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । बजेट वक्तव्यमा दर्शाइएका आयोजनाले समयमै उत्पादन सुरु गरे भने स्वदेशमा मात्र खपत गर्न सम्भव देखिँदैन । निर्यात नगरी हुँदैन । तर, दुर्भाग्य आगामी आवको बजेट बक्तव्यमा विद्युत् निर्यातको सम्भावित कार्यक्रमबारे कुनै उद्घोष गरिएन । झन् खपतमा प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरण र यातायातका साधनलाई महंँगाे पारियो ।
विद्युतको उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्र आफैंले विद्युत् निर्यात गर्ने अनुमति पाएका छैनन् । तिनीहरूले आफ्नो उत्पादन प्राधिकरणलाई नै बेच्ने हुन । प्राधिकरणले विद्युत निर्यात गर्न सकेन भने क्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्ने वा उत्पादन गरेर खेर फाल्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।
जलविद्युत् उत्पादनको यही तथ्यांकलाई हेरेर नै आगामी आ.ब.को बजेट वक्तव्यमा विद्युत् स्वदेशी खपत बढाउने नीतिहरू घोषणा गरिएको देखिन्छ । व्यावसायिक रूपमा विद्युत् खपत गर्ने उद्योग र विद्युत् बचत हुने समयमा खपत गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिने विद्युतबाट चल्ने यातायातका साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिने जस्ता नीति प्रमुख रूपमा बाेलिएका छन् ।
साथै, विद्युतको घरायसी खपतमा २५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने, राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीको विस्तार गरी गाउँगाउँमा विद्युतको पहुँच पुर्‍याउने, ग्रामीण सामुदायिक विद्युतिकरणमा जोड दिने, विद्युतीय चुल्हो र विद्युतबाट चल्ने घरायसी उपकरणको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिने जस्ता नीति पनि परेकाे देखिन्छ ।
सरकारी नीति विद्युतको उपयोग बढाउने, बजेट वक्तव्यमा विभिन्न सहुलियतको घोषणा पनि गर्ने तर, विद्युतीय उपकरण र सवारी साधनको पैठारीमा महसुल बढेकोले सामाजिक सञ्जालहरु रंगिएका हुन् । सरकारले घोषित नीतिसँग एकरूपता हुने व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
साना विद्युतीय सवारी साधन र अन्य सवारी साधनको महसुल दरमा भिन्नता रहेको छैन । हुनत, द्रष्टव्यबाट विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । तैपनि, विगत वर्षहरूको भन्दा धेरै महँगो पर्ने देखिन्छ । केही घरायसी प्रयोगका विद्युतीय उपकरणहरू पनि महसुलको कारण मूल्य बढ्नेको सूचीमा परेका छन् ।
सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी नारा दिएर जलविद्युतमा जनतालाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । फलस्वरूप अहिले अधिकांश नागरिककाे हातमा जलविद्युत योजनाहरुमा शेयर लगानी गरेका प्रमाणपत्र छन् । यस्ता लगानीकर्ताले नाफा पाउन योजनाबाट पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गरेर विक्री वा निर्यात गर्नुको विकल्प छैन ।
जलविद्युतको प्रमुख उत्पादक प्राधिकरण थियो । सरकारी नीतिकै फलस्वरूप निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू पनि जलविद्युतको उत्पादनमा आकर्षित भएका छन् । त्यसै अनुरूप जलविद्युत् उत्पादन बढदो छ । आउँदा वर्षमा निजी लगानीकर्ताले जलविद्युत् उत्पादनमा प्राधिकरणलाई उछिन्ने छन् । तर, निजी क्षेत्रबाट यो उत्पादन सहजै भएको होइन, विद्युत उत्पादनका क्रममा धेरै समस्याको सामना गर्नु परिरहेको प्रवर्द्धकले बताइरहेका छन् ।
प्रत्येक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने समयमा उनीहरूले माग प्रस्तुत गरेका समाचार छापिन्छन् । यस वर्ष पनि छापिए । यस वर्ष त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै माग प्रस्तुत गरेको समाचार आयो । ती मागमध्ये कति सम्बोधन भयो उनीहरूको कुनै प्रतिक्रियाका समाचार आएका छैनन् । मेरो विचारमा कर सम्बन्धी माग पुरा भएका छैनन् ।
निजी क्षेत्रका मुख्य माग आयोजनाको निर्माण चरणको खरिदमा तिरेको मू.अ.कर फिर्ता हो । विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेका योजनालाई प्रतिमेगावाट रु. ५० लाख मू.अ.कर फिर्ता दिनेबारे सरकारको निर्णय भएको थियाे । लामो समयदेखिको यो माग जायज हो होइन सरकारले व्यवहारमा बोलिदिनुपर्ने देखिन्छ ।
विद्युत् शक्ति, मू.अ.कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ मा परेको वस्तु भएकोले मू.अ.कर छुट छ । यस्तो वस्तुको कारोबार गर्नेले खरिदमा तिरेको कर कट्टा गर्न वा फिर्ता लिन पाउँदैनन् । अब, विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेकोले त्यस्ता वस्तुको लागत कम गर्न पनि मू.अ.कर कट्टी गर्न अथवा फिर्ता दिने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि, गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित करको प्रभाव निर्यात हुने वस्तुको मूल्य पर्नु हुँदैन ।
निजी क्षेत्रको अर्को माग, आयोजनाको निर्माण गर्दा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा गर्नुपर्ने स्रोतमा कर कट्टी सम्बन्धी रहेको देखिन्छ । आय कर सम्बन्धी मुद्दा भएकोले सरकारसँग माग राख्‍नु जायज हो । तर, यस्तो ब्याज आय ऋण लगानीकर्ता विदेशी संस्थाको हुने भएकोले ऋण सम्झौता गर्दा नै कर कानुनको अवगत गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको मुल मुद्दा भनेको नेपाल जलविद्युत निर्यात गर्ने हैसियतमा पुगेकोले कुन मुलुकमा निर्यात गर्ने भन्ने हो । भारतबाट लामाे समयदेखि विद्युत् आयात भइरहेको छ । अब भारतले नेपालबाट आयात गर्दछ वा गर्दैन ? गरे कति दरमा गर्दछ यकिन हुनुपर्ने देखिन्छ । केही समय पहिले नेपालबाट बंगलादेशले विद्युत् किन्ने सहमति जनाएको समाचार आएको थियो । यसमा त्रिपक्षीय सहमति हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकि, बंगलादेशसम्म विद्युत् पुर्‍याउन भारतको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालबाट विद्युत निर्यात हुन सक्ने नजिकका देश भारत र बंगलादेश नै हुन् । ती देशमा विद्युत् निर्यात गर्न नसके निजी क्षेत्र उत्साहित भएर गरेको लगानी र प्राप्त उत्पादन खेर जानेछ । फलतः नीति र व्यवहारको चेपुवामा निजी जलविद्युत् उत्पादक, उत्पादन र उपभोग पर्ने निश्चित छ ।